रगतमा अक्सिजनको कमि पूरा गर्न खानुहोस् यी ८ फलफूल – Khula kura
रगतमा अक्सिजनको कमि पूरा गर्न खानुहोस् यी ८ फलफूल
कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारणले अधिकांश बिरामीहरुको शरीरमा अक्सिजनको स्तर कमि भएको पाइएको छ। मानिसहरु अवस्था गम्भीर नहोस् भन्दै अक्सिजनको स्तर बढाउन थुप्रै घरेलु उपायहरु अपनाइरहेका छन्।
विशेषज्ञका अनुसार यस परिस्थितीमा अक्सिजन युक्त खाद्य पदार्थको सेवन गर्नु एक राम्रो विकल्प हुन सक्ने वताउँदै आएका छन्। आफ्नो रगतमा अक्सिजनको स्तर वृद्धि गर्न आहार योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने खानामा ८० प्रतिशत अल्कलाइन भएको खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ।
जसले, रगतमा अक्सिजनको स्तर बढाउन धेरै मद्दत गर्दछ। विज्ञहरूकाअनुसार अल्कलाइन युक्त खानेकुरा खाँदा पर्याप्त अक्सिजन प्राप्त गर्न सकिन्छ। र पहिलेभन्दा अझ स्वच्छ र स्वस्थ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
अल्कलाइन युक्त खानेकुराले के हुन्छ ?
– शरीरको पीएच स्तरलाई सामान्य राख्न मद्दत गर्दछ।
– शरीरका अंगहरूलाई राम्रोसँग काम गर्नका लागि पनि यो सहयोगी हुन्छ।
– रक्तप्रवाहमा अक्सिजनको स्तर बढाउँछ।
– ल्याक्टिक एसिडको निर्माणलाई रोक्दछ ।
– शरीरमा विभिन्न कार्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्दछ।
१. खर्बुजा – खर्बुजा सबैले खान्छन् । तर धेरै व्यक्तिहरूलाई यसले रगतमा अक्सिजनको कमिलाई पूर्ण गर्ने बारेमा थाहा हुँदैन। यस फलमा पिएच भ्यालु ९ हुनुका साथै अल्कालाइन पनि उच्च हुन्छ। यसमा पाइने अत्याधिक फाइबर र पानीको मात्राका पिसाब सफा गर्न पनि काम गर्छ। त्यसैगरी, यसमा पाइने लाइकोपिन, बीटा क्यारोटीन र भिटामिन–सीले संक्रमणबाट पनि बचाउँदछ
२. कागतीले अक्सिजनको स्तर बढाउँछ – कागती अक्सिजन युक्त एक फल हो। सामान्यतया यो एसिडिक हुन्छ, र यसको सेवन गरिसकेपछि शरीरमा गएर यो अल्कलाइनमा परिवर्तन हुन्छ। जसले चिसो, खोकी, फ्लु, छाती पोलेको र संक्रामक रोगहरु यो धेरै लाभदायक हुन्छ। यसले मानव कलेजोलाई टोनिकको काम गर्दछ।
३. नासपाती, अनारस र किसमिस प्रशस्त मात्रामा खानुहोस् – यी खाद्य पदार्थहरूको सेवन गरेर अक्सिजन स्तर बढाउन सकिन्छ। यी सबै खाद्य पदार्थहरूमा पीएच भ्यालु ८.५ हुन्छ । यसका साथै, यसमा एन्टिअक्सिडन्ट भिटामिन ए, बी र सी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यी फलहरुको रगतलाई नियन्त्रण गरेर रक्तचाप घटाउन पनि मद्दत गर्दछ।
४. मेवा र आँप – यस समूहका फलहरुमा पिएच भ्यालु ८.५ हुन्छ र यी दुवै फलहरुले मिर्गौला सफा गर्न पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्द छ। यसैगरी, मेवाले आँतलाई पनि मजबुत बनाउँछ र मानिसलाई कब्जियतबाट पनि बचाउँदछ । विशेषगरी, जब मेवालाई काँचो खाइन्छ, यसले आँतबाट हानिकारक पदार्थहरू निकाल्ने निकै ठूलो भूमिका खेल्दछ।
५. यसको पीएच भ्यालू ८.५ हुन्छ र यसमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। क्याप्सिकमले तनाव तथा रोगहरु निम्त्याउने फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ। यसमा भएको एन्टी–ब्याक्टेरियल गुणका कारण यसले शरीरको एण्डोक्राइन प्रणालीलाई पनि मजबुत बनाउँछ।
६. आरुबखडा – आरुबखडामा प्रशस्तरुपमा फाइबर पाइन्छ। जसको पीएच भ्यालू ८ हुन्छ। र यसलाई पचाउन पनि सजिलो हुन्छ। यसमा थुप्रै इन्जाइम्स भएका कारण शरीरमा हार्मोनल सन्तुलन कायम हुने गर्दछ । यदि रगतमा अक्सिजनको स्तर बढाउन चाहनुहुन्छ भने, आरुभखराको सेवन लाभदायक साबित हुन सक्छ।
७. गाजर र खजुरको सेवन – रगतमा अक्सिजनको कमि पूरा गर्न गाजर, खजूर, किसमिस, जामुन, पाकेको केरा, लसुन, ज्वानो खानुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा, यी सबै फलहरुमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पाइन्छ। त्यसैले यी फलहरु स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक हुन्छन्। यी फलहरुको पीएच भ्यालु ८ हो। यसैगरी, लसुन, जामुन र खजुरमा यस्ता गुणहरु पाइन्छन् जसले उच्च रक्तचापलाई समेत नियन्त्रण गर्दछ।
८. क्याप्सिकम – किवी – किवी तथा अन्य फलको जुसहरु सबैले सेवन गर्छन्। तर. रगतमा अक्सिजनको मात्रा बढाउनका लागि यस फललाई आफ्नो दैनिक आहारमा समिल गर्नु पनि निकै आवश्यक हुन्छ। पबमेडमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार यो फलमा फ्लाभोनोइड्स उच्च मात्रामा पाइन्छ। त्यसैगरी, यसमा प्राकृतिक सुगर वा गुलियो भएका कारण भोजनलाई पचाउन निकै सहयोग गर्दछ।
यो फलमा अल्कलाइनको निर्माण गर्ने विशेष गुणहरु हुन्छ र यसले शरीरलाई ऊर्जाले भरि दिन्छ।
विश्वका धनाद्य बिल गेट्स आफ्नो पोर्श कारमा सुटुक्क प्रेमिका भेट्न गएको थाहा पाएपछि…